mushaTURKEYEastern Anatolia Region44 Malatya WeatherShanduko Shanduko Inoshanda Yakatangwa kuAltnnkayı Boulevard
09 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 44 Malatya Weather, Eastern Anatolia Region, GENERAL, HIGHWAY, TURKEY 0
Altinkayisi boulevard shanduko yekushandurwa zvidzidzo zvakatanga
Malatya Metropolitan Municipality iri kuita shanduko, shanduko uye kugadzirisa patsva inoshanda pane yeGolden Apricot Boulevard, iri iro hombe boulevard muMalatya, iyo inobatanidza Tecde neMaşti junction.
3.3 makiromita akareba, 50 mamirimita upamhi hweGoridhe Apricot Boulevard pamberi pechikamu che1.1 kilometer munzvimbo inogara nzvimbo yeMetropolitan Municipality, iyo yakasara 2.2 kilomita yekutanga yakatanga kuita mabasa.
Meya weMetropolitan Selahattin Gürkan, Goridhe Apricot Boulevard uye vakacherekedza, vakataura nezve nezve basa kuti riitwe. Mutevedzeri woMunyori Mukuru, Latif Okyay nevamwe vakuru vemapazi nemaneja emapazi vakaperekedza rwendo urwu.
Mehmet Mert, Head of Road Construction uye Dhipatimendi reConvention Coordination, akataura kuti vakatanga kushanda paGolden Apricot Boulevard inova imwe yemigwagwa yagara ichishandiswa muMalatya maererano nekutenderera kwemotokari kubva pazuva ravakavhurwa. Isu tiri kuita manje PMT akateedzera asphalt. 2.2 ichavhura nzira yedu yekufambisa mumasikati. "
Gürkan: Boulevard yedu ichavawo nechitarisiko chakajeka mushure mekuita nzvimbo
Meya Selahattin Gürkan vakatsanangura kuti vatanga kushanda mukugadzira iyo Goridhe Apricot Boulevard iri kufadza Malatya ndokuti, ık Isu takaronga zvedu nzira dzekuti boulevard sekubva kwa3 nekuuya kwe3. Nokukurumidza semazuva e15, isu tinopedzisa asphalt inoshanda pano. Isu tine hanya nezve kutanga kwebasa uye nguva yekupedzisa. Sezvo isu tisingade kuti vagari vedu vatamburwe zvakanyanya muzvidzidzo izvi, tinonzwira tsitsi nyaya iyi. Sidewalk, kuvhenekera, kuvhara nzvimbo, basa repakati-svikiro rinotangwa munguva pfupi. Tiri kushanda kudyara miti isingade mvura yakawanda mudipiri redu repakati. "Chigaro chedu chegungwa chichava nechitarisiko chakanaka nehurema."
Kana nzira dzese dzinoshanda mudunhu rino dzapera, vagari vedu vagadzikiswa
Ichisimbisa kuti Goridhe Apricot Boulevard ichabatana neSaraay Bosna Street uye yakabatana naFahri Kayahan Boulevard, Meya Gürkan akati, "Boulevard yedu iri kusangana neMranhlıdut Street." Kuti tiite kuti traffic ifambe ine hutano, takagadzira nzira yakanaka pakunosangana migwagwa yemigwagwa yeAltnnkayı-Güngör-Mıhlıdut. Huru axis yenzvimbo ino iGoridhe Apricot, kana tikabatana neSaray Bosna Street iyo yatakavhura kumadokero, tichava nenzira nyowani kumabvazuva-kumavirira nzira. Izvi zvinorerutsa traffic yemadhorobha nemavirira emugwagwa wemhete. Boulevard yedu zvakare imwe yemakona ekubatanidza eSouth Belt mugwagwa. Migwagwa yose painoshanda mudunhu rino painopera, vagari vedu vagadzikiswa ”.
Shanduko muBursa 'Altıparmak' mu 'rail' 06 / 11 / 2012 Bursa Mayor Altepe, T1 tsanangudzo yeAlparmak mukuongorora, basa richapedzwa zuva re20 mushure mokunge chiso chaAltiparmak'ın chichinje chose, akadaro. Migwagwa yemigwagwa, iyo yakatanga munguva ino, mitambo yeTram ichabatanidza maguta ose achisimbisa kuti Metropolitan Mayor Recep Altepe, chimwe chezvinhu zvakakosha pane izvi, mutsara weT-1 munguva shoma yekupedzisa chikamu chechitanhatu chechimiro chezvakatipoteredza, vakati vakashanda basa rakaoma. T-1 line Stadium Street, Chitatu Market uye Darmstad Street mushure mokunge gweta reAlparmak ruchiyeuchidza kuti basa rakatanga Altepe, 60'lık muzana yemugwagwa akaiswa mumigwagwa, akadaro. Meya Altepe, başlayan Kutanga kwevhiki yapfuura ...
Shanduko muBursa 'Altıparmak' mu 'rail' 06 / 11 / 2012 Bursa Mayor Altepe, T1 tsanangudzo yeAlparmak mukuongorora, basa richapedzwa zuva re20 mushure mokunge chiso chaAltiparmak'ın chichinje chose, akadaro. Migwagwa yemigwagwa, iyo yakatanga munguva ino, mitambo yeTram ichabatanidza maguta ose achisimbisa kuti Metropolitan Mayor Recep Altepe, chimwe chezvinhu zvakakosha pane izvi, mutsara weT-1 munguva shoma yekupedzisa chikamu chechitanhatu chechimiro chezvakatipoteredza, vakati vakashanda basa rakaoma. T-1 line Stadium Street, Chitatu Market uye Darmstad Street mushure mokunge gweta reAlparmak ruchiyeuchidza kuti basa rakatanga Altepe, 60'lık muzana yemugwagwa akaiswa mumigwagwa, akadaro. Meya Altepe, "Rimwe vhiki ...
Tender Notice: KAYAŞ-IRMAK-KIRIKKALE - ÇETİNKAYA ELECTRIFICATION FACILITIES CONSTRUCTION 16 / 04 / 2012 Kayaş - River - KIRIKKALE - CETINKAYA magetsi MADE TC State Railways General Directorate (TCDD) Kayaş - River - Kırıkkale - Cetinkaya magetsi mamiriro basa rokuvaka 4734 No. richatsikwa paakavapa ne rakavhurika nzira kubudikidza 19 Chikamu paruzhinji zvokuvakisa mutemo. mashoko yainyatsodonongodza younyoro dziri pasi apa. Tsitsi Registration Number: 2012 / 37411 1-Administration a) Address: TALATPAŞA BULVARI NO: 3 06330 pakati ALTINDAĞ-Ankara b) Telephone uye Fax nhamba: 3123090515-239, 4139, 4409 - 3123115305 c) E-Mail Address: zvinhu @ TCDD. gov.t ari matatu) nyoro gwaro anogona kuonekwa Internet kero: https: //ekap.kik.gov.tr/ekap / ...
ÇETİNKAYA-Edirne The matsutso chehupenyu AZVAKAITIKA-HORASAN Köprüköy Stations KM.1223 + + 0000 1225-500 PAKATI kwezvivako kuvandudza BASA MUNYORO 03 / 08 / 2012 Okisheni Musingavayemedzi: Ismail Karahan Auktionshäuser Manager Phone: 346221 70 00 / 4171 Auktionshäuser Manager Fax: 346 221 32 54 İlan Date: 23.07.2012 00: 00: 00 Auktionshäuser Date: 14.08.2012 00: 00: 00-10: 30 Specification Cost: 100,00-TL nyoro Procedure: Anoshanda nyoro Subject: Construction zvinobudisa Registration No: 2012 / 90098 Mail: tcddsivasyolmd@hotmail.co kwezvivako kuvandudza DZEBHIZIMISI zvokuvakisa Cherechedzai REPUBLIC GENERAL Directorate of State Railways (TCDD) 4. REGION Road Directorate ÇETİNKAYA-Edirne The matsutso danho AZVAKAITIKA Köprüköy-HORASAN Stations KM.1223 + 0000-1225 + 500 PAKATI rokuvaka kwezvivako kuvandudza 4734 No. richatsikwa paakavapa ne rakavhurika nzira kubudikidza 19 Chikamu paruzhinji zvokuvakisa mutemo. Tsanangudzo yakajeka pamusoro pechenda inopiwa pasi apa. Tsitsi Registration Number: 2012 / 90098 1-Administration a) Address: Nadira Yazicioglu BULVARI NO: 2 SÝVAS ...
Udem Hak-Sen Zonguldak Province Sener Yalcinkaya Akasarudzwa 26 / 05 / 2018 Transport uye Workers Railway 'Union (Ude I Hak-Sen) President wenyika Zonguldak, kunoshamisa basa uye budiriro Movement Officer akanzi Sener Yalcinkaya. Ude I Hak-Sen, vatsigiri chero bato rezvematongerwo enyika havana uchanyauka kana zvirevo olmayacaktır muna Mecucut Unions zvigadziriswe. kuzvidavirira kugara kure nyaya, uye kazhinji nokuti politicized mabasa ayo akaratidza yakareba Lanes siyana dzakanga ut Ude I Håkan Wanga pedyo nguva dzose kutakura vashandi uye kuwana zvinetso zvavo. Yalcinkaya Sen Zonguldak munin'ina wedu, mutungamiri yedu nedzimwe Regional Musoro Trade Unions mutungamiri uchava asisiri chero mubvunzo kuti izvi zvinodiwa. Zonguldak Mutungamiri wenyika yeTurkey uye Z
Shanduko muBursa 'Altıparmak' mu 'rail'
ÇETİNKAYA-Edirne The matsutso chehupenyu AZVAKAITIKA-HORASAN Köprüköy Stations KM.1223 + + 0000 1225-500 PAKATI kwezvivako kuvandudza BASA MUNYORO
Udem Hak-Sen Zonguldak Province Sener Yalcinkaya Akasarudzwa
Yakanyorwa mugwagwa weDubrovnik
Shanduko Mabasa Pakati peGar Square uye Mithatpaşa Station
Ahmet Emin Yilmaz: MuBursa, tram yakabuda, kuchinja kunotanga
Süleyman Yıldız: Shanduro yeNzira muTCDD